सल्लाह काम गर्दछ जब तपाईं दाँत सेतो गर्न चाहनुहुन्छ | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
भनेर दाग वा पहेंलो दाँत हटाउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ बाहिर धेरै whitening उत्पादनहरु छन्. तपाईं पाउनुहुनेछ whitening, स्ट्रिप्स, whitener वा whitening स्ट्रिप्स भरिएको ट्रे. तीमध्ये महँगो व्यावसायिक whitening, लागि सबै ठूलो विकल्पहरू छन्.
स्ट्रबेरी दाँत सेतो एउटा प्राकृतिक तरिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. स्ट्रबेरी पाइने प्राकृतिक यौगिकों रसायन प्रयोग बिना दाँत सेतो हुनेछ. के तपाईं आफ्नो दाँत मा माझ कि सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो धेरै मिनेट को लागि बस्न दिनुहोस् वा आधा एक स्ट्रबेरी कटौती एक पेस्ट मा स्ट्रबेरी Mash गर्न सक्नुहुन्छ, एक सानो हुँदा लागि आफ्नो दाँत मा त यो रगडना.
टिप! फल दाँत समय केही सेतो ठूलो र प्राकृतिक तरिका हो. आफ्नो दाँत दांत मा ठूलो काम केही फल को एउटा उदाहरण स्ट्रबेरी र सुन्ताला हुनेछ.
बनाउन आफ्नो दाँत कुशलता घर प्रयोग दाँत खुराक दांत अघि साफ निश्चित. तपाईं सफा दाँत मा तिनीहरूलाई लागू यदि Whitening दाँत उत्पादनहरु सबै भन्दा राम्रो काम गर्नेछ. तपाईंले तिनीहरूलाई सेतो गर्न सुरु गर्दा आफ्नो दाँत छैन सफा हुनुहुन्छ भने परिणाम असमान र सजिलै देखिने हुन सक्छ कि राम्रो मौका छ.
दांत स्ट्रिप्स दाँत व्यापक उपलब्ध र अत्यधिक सस्ती. तपाईं केवल आफ्नो दाँत मा पट्टी राख्न आवश्यक, यसलाई सफा र आफ्नो दाँत whitens रूपमा त यो त्यहाँ निर्दिष्ट समय अवधि को लागि छोड्ने. एकपटक लोकप्रिय, दांत स्ट्रिप्स उनीहरूको गरिब परिणाम धेरै संग पक्षमा गुमाएका.
टिप! दाँत whitening उत्पादनहरु आफ्नो दाँत तपाईं प्रयोग गर्दै उत्पादन गर्न संवेदनशील बनाउन सक्छ. यो केवल अस्थायी छ तापनि दर्दनाक छ.
तपाईं खाने वा गरेको दाँत प्रक्रिया को एक whitening, पछि पिउने गर्दा धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ. तिनीहरूले दागरहित बनाइन्छन् भएपछि आफ्नो दाँत प्राप्त दाग हुनेछ थप सजिलै दाग अवशोषित. यो आफ्नो नयाँ दागरहित बनाइन्छन् दाँत पछि गाढा रंग खाद्य पदार्थ र पेय बच्न महत्त्वपूर्ण छ. कफी कुरा एउटा उदाहरण सजिलै आफ्नो दाँत द्वारा अवशोषित जाएगा र discoloration हुन सक्छ छ.
तपाईं एक सुन्दर सेतो मुस्कान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नियमित cleanings लागि दन्त चिकित्सक जान छ. बनाउन सफा हरेक लागि जान निश्चित6महिना. दन्त चिकित्सक मा त तपाईं पछि भूल छैन गर्दा नयाँ नियुक्ति सेट अप गर्न सधैं सम्झना. एक टेलिफोन कल तपाईंलाई पूर्व स्मरण गराउन आफ्नो दन्त कार्यालय सोध्न.
टिप! तिनीहरूलाई दाग मुक्त राख्न आफ्नो दाँत प्रत्येक भोजन पछि ठूलो तरिका लिंदा छ गर्न. धेरै खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ आफ्नो दाँत दाग गर्न सम्भावित छ.
तपाईं चीनी सदृश खाद्य पदार्थ खाने पछि प्रयोग गर्न भनेर एउटा सानो टूथब्रश पूरा. यी मिठाई आफ्नो दाँत लीन, र staining कारण वा तपाईं पहिले नै हुन सक्छ के थप्न. यस मिठाई खाने पछि, छोटो रकम लागि आफ्नो दाँत माझ्छु. टूथपेस्ट आवश्यक छैन; बस आफ्नो दाँत स्क्रब र त्यसपछि पानी राम्रोसँग कुल्ला.
बेकिंग सोडा, जब पेरोक्साइड संग संयुक्त, गुण टूथपेस्ट ब्याक्टेरिया कम र दाग दिनले खेल्छ. बीच लागि समाधान संग आफ्नो दाँत लिंदा प्रयास 5-10 मिनेट. तपाईँले सधैँ अचाक्ली कठिन लिंदा छैन भनेर होसियार, मिश्रण आफ्नो मसूडों साँच्चै रीस उठाउनु गर्न सक्छन्.
टिप! आफ्नो दाँत सेतो रहन सुनिश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो तिनीहरूलाई सफा गर्न दन्त चिकित्सक गएर नियमित भेटघाट सेट अप गर्न छ. केवल एक पेशेवर सफाई tartar गठन-अप र discoloration को वर्ष सच्याउन सक्नुहुन्छ.
दाँत whitens एक उत्पादन प्रयोग गर्दा आफ्नो दाँत झुनझुनी सुरु वा संवेदनशील लाग्छ भने, टुटाउन प्रयोग तुरुन्तै. तपाईं आफ्नो दाँत थाहा भन्दा तपाईंले धेरै क्षति गरिरहेको सकिएन, त्यसैले यो एक पेशेवर सिफारिस प्राप्त गर्न भनेर बिन्दुमा सबै भन्दा राम्रो छ. आफ्नो विकल्प बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न.
टिप! आफ्नो दाँत को नियमित flossing र लिंदा आफ्नो दाँत दांत सबैभन्दा सफल विधिहरू बीचमा छ. यी प्रविधी प्रयोग गरेर, तपाईं पट्टिका buildup कम गर्नेछ, दाँत discoloration को एक मुख्य कारण.
तपाईँले सधैँ प्रयोग घर whitening, उत्पादनहरु मा सबै निर्देशनहरू पालना. निर्माता मा निर्देशन रूपमा यो उत्पादनहरु ठीक र केवल दांत आफ्नो teeth.Use दाँत आफ्नो मसूडों र क्षति रीस उठाउनु सक्नुहुन्छ.
तपाईं प्रक्रिया दांत एक दाँत undergo पछि, यो तपाईं प्रत्येक भोजन पछि आफ्नो दाँत माझ्छु महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं खाना आफ्नो दाँत मा निर्माण गरौं भने, यसलाई आफ्नो मुखमा जीवाणु वृद्धि हुन सक्छ. जीवाणु आफ्नो दाँत कोमल गर्न सक्नुहुन्छ, जो क्षति र गिरावट तिनीहरूलाई खतरा बनाउन सक्छ.
टिप! चुरोट जोगिन, कफी र बलियो चिया. यी कुराहरू आफ्नो दाँत खैरो गर्न सक्नुहुन्छ.
एक पराल मार्फत कफी र अन्य staining तरल पिउने Whiter दाँत रही प्रभावकारी तरिका हो. यो पराल दाँत staining कारण समय दिन्छ. तरल आफ्नो दाँत छल्न र आफ्नो मुख तल सीधा जान्छ हुनेछ.
आफ्नो दाँत सेतो गर्न सामान्य रूपमा एक टूथब्रश र ब्रश मा स्ट्रबेरी रस राख्नु. रस देखि एसिड आफ्नो दाँत तामचीनी softens, आफ्नो दाँत देखि discoloration धेरै सफा गर्न यसरी तपाईं सक्षम टाढा. तपाईंले यो विधि प्रयोग गरेर एक लाख भन्दा टाढा कम डलर लागि आफ्नो लाख-डलर मुस्कान पुनर्स्थापना गर्न सक्षम.
टिप! आफ्नो दाँत दांत पछि, हँसिलो राख्न सम्झाउने Vaseline लागू. यो एक अनुकूल स्वाद नहुन सक्छ, तर यो घन्टा को एक जोडी को लागि staining आफ्नो दाँत सुरक्षा दिन्छ कि एक घेरा सिर्जना मा राम्रो छ.
तपाईं एक ठूलो मुस्कान राख्न चाहन्छु सुनिश्चित गर्न नियमित आफ्नो दाँत माझ्छु. खाद्य र अन्य वस्तुहरू आफ्नो दाँत मा निर्माण र केही समय पछि उनलाई दाग सक्छ. तपाईं रूपमा लामो तपाईं नियमित दाँत-लिंदा तालिका नियमित कायम रूपमा दाँत discoloration बारेमा fret गर्न हुँदैन.
रंग mouthwashes नराख्नुहोस्. यी mouthwashes सास तरोताजा सक्छ, तर तिनीहरूले शायद प्रक्रिया मा आफ्नो दाँत दाग हुनेछ. रक्सी भन्दा एक घटक छ, र आफ्नो जिब्रो र गिजा हानि गर्न सक्छ र आफ्नो रगत मा अवशोषित गर्न सकिन्छ.
टिप! तपाईंले तिनीहरूलाई लिंदा आफ्नो दाँत सुरक्षा. तपाईं साथै यो एक कदम अगाडी लाग्न सक्छ, र आफ्नो दाँत whitens एक टूथपेस्ट प्रयोग सुरु.
यो पनि संवेदनशील र staining थप susceptible हुन सक्छ.
केहि खरीद गर्नु अघि आफ्नो दाँत सेतो गर्न स्वास्थ्यप्रद तरिका बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा. आफ्नो दन्त चिकित्सक के सबै भन्दा राम्रो विकल्प बाहिर छन् थाहा हुनेछ, र उसले पनि दाँत whitening, लागि केही प्रणाली सम्बद्ध साइड इफेक्ट बारेमा बताउन सक्षम हुनेछ.
टिप! आफ्नो दाँत flossing को एक बानी बनाउन. पट्टिका हटाउने एड्स Flossing, जो आफ्नो दाँत संग discoloration मुद्दाहरू गराउँछ.
आफ्नो मुख चोट सुरु भने, तुरुन्तै दांत रोक्न. दांत उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा संवेदनशीलता अनुभव भने, तपाईं एक दन्त चिकित्सक संग यसबारे छलफल गर्न सक्छन् नगरेसम्म तुरुन्तै offending उत्पादन प्रयोग टुटाउन पर्छ.
Whiter दाँत लागि, चिया वा कफी पिउन छैन. यी पेय दाँत discolor. तपाईं कफी पिउन थिए भने, तपाईं गरिन्छ पछि तपाईं आफ्नो मुख बाहिर तुरुन्तै कुल्ला बनाउन. यो यी पेय आफ्नो दाँत मा छ कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव सुस्त मदत गर्न सक्छ.
टिप! तपाईं Whiter हेर्न आफ्नो दाँत चाहनुहुन्छ भने सिट्रस फल खान छैन प्रयास. साथै, सिट्रस फल को रस जोगिन.
एक दाँत दांत प्रक्रिया कुरा. रही cavities वा कुनै पनि दन्त कामको लागि जाँच पछि आफ्नो दाँत सेतो छैन.
तपाईं एक पाउडर मा ड्राई बे पात र सुन्तला peels पीसने गर्नुपर्छ. यो पाउडर र ब्रश यो मिश्रण संग पानी थप्न. यसो गर्दा पनि गम रोग र cavities रोक्न मद्दत गर्नेछ.
टिप! आफ्नो दाँत सेतो गर्न ओखर रुखकोबोक्रा प्रयोग. छाल एउटा सानो बिट लिन र आफ्नो दाँत मा रगडना.
आफ्नो दाँत सेतो गर्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग. तपाईं बस समाधान मा डूबा एक washcloth वा कुनै पनि कपास सामाग्री dipping द्वारा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. नियमित रूपमा आफ्नो दाँत को क्षेत्रमा भन्दा गीला कपडा RUB. यो पेरोक्साइड हल्का दाग मद्दत गर्छ र धो कपडा एक स्क्रबर रूपमा कार्य गर्नेछ.
केही प्राकृतिक उपचार सेतो दाँत मदत गर्नेछ, यस्तो स्याउ साइडर सिरका रूपमा. यो विधि आफ्नो मुखमा ब्याक्टेरिया र दाग हटाउन मद्दत गर्छ, यो प्रक्रियामा आफ्नो दाँत शुद्ध पार्छ रूपमा. एक दिन एक पटक कुल्ला गर्नु, सामान्यतया बिहान, स्याउ साइडर सिरका संग, र आफ्नो दाँत लिंदा गरेर फलो.
टिप! नुन संग आफ्नो दाँत माझ्छु. साल्ट प्राकृतिक छ र आफ्नो दाँत मा दाग छुटकारा मदद गर्न सक्नुहुन्न भन्ने उपाय छ.
पानी पीछा दाग-पैदा पेय. पानी कुल्ला एक गिलास सेट देखि पेय पैदा दाग रोक्छ. अर्को विचार गाढा-रंग पेय पिउने गर्दा पराल प्रयोग गर्न छ.
एक केले बोक्रा संग आफ्नो दाँत माझ्छु. यो प्रक्रिया धेरै सरल र सस्तो छ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो दैनिक तालिकामा यसलाई लागू गर्न सक्छन्. एक पटक तपाईं केले खुली गर्नुभएको, बस तपाईं तिनीहरूलाई माझ अघि आफ्नो दाँत भन्दा छील चलान. यो गरिरहेको पछि, तपाईं सामान्यतया हुनेछ रूपमा आफ्नो दाँत माझ्छु. यो तपाईं तत्काल whitening, परिणाम दिन हुनेछ.
दाग छुटकारा प्राप्त गर्न सुन्तला बोक्रा गरेको नरम पक्ष प्रयोग गर्न र आफ्नो दाँत बनाउन. सूक्ष्मता जमीन बे आफ्नो दाँत लागि एक पेस्ट बनाउन छोडेर पनि तपाईं सुकेको सुन्तला बोक्रा मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ. बनाउन सबै फल चिनी हटाउन राम्ररी afterwords आफ्नो मुख कुल्ला गर्न निश्चित.
तिनीहरूले तपाईंलाई Whiter दाँत दिनेछौँ दावी कुनै पनि टूथपेस्ट सुन्न छैन. तिनीहरूले तपाईं एक मामूली whitening प्रभाव दिन सक्छ, तर अतिरिक्त प्रविधी शायद आवश्यक छन् भन्ने महसुस. तपाईं अझै पनि एक दांत टूथपेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, बनाउन यो मा बेकिंग सोडा छ कि एक प्राप्त गर्न निश्चित.
एक जेल आफ्नो दाँत Whiter हेर्न सेतो मदत गर्न घरमा उपयोग गर्न सकिन्छ प्रदान गर्न आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न. यो प्रविधी गर्न आठ रंग आफ्नो दाँत बनाउन सक्छ!
तपाईं Whiter दाँत प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै भने, दन्त चिकित्सक जाने तिनीहरूलाई गर्न सक्छन् तपाईं अक्सर रूपमा साफ गरेका. नियमित दन्त cleanings तपाईं दाँत खुराक को आफ्नो whitening, मा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका को एक हो. तपाईं cleanings कम्तीमा हरेक छ महिना लागि आफ्नो दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्न आवश्यक.
के तपाईं ठीक आफ्नो दाँत प्रकार को ब्रश सही टूथब्रश छ सुनिश्चित गर्न आवश्यक. एक बिजुली टूथब्रश हटाउने पट्टिका र दाग हरेक दिन आफ्नो दाँत मा संचित मा विशेष राम्रो छ. यो तपाईंको दाँत स्वाभाविक क्लीनर र Whiter हुनेछ.
तपाईं सफा र तपाईं टूथपेस्ट र flossing संग एक दैनिक आधार पालना भने आफ्नो दाँत सेतो गर्नुपर्छ. यो अत्यधिक हटाउने दाग मा प्रभावकारी छ रूपमा उत्पादन गर्ने एक प्राकृतिक whitening, संघटक रूपमा बेकिंग सोडा समावेश चयन.
तपाईं रंग र pigments को उच्च स्तर आफ्नो दाँत दाग गर्न सक्ने कुनै पनि दांत procedure.Drinks पछि पराल प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत Whiter राख्न सक्नुहुन्छ. को पराल प्रयोग staining रसायन संग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर अगाडि दाँत रोक्न हुनेछ.
crunchy छन् कि healthful खाद्य पदार्थ खान. crunchy खाद्य पदार्थ को abrasiveness आफ्नो दाँत शक्ति सफाई थप्न जब तपाईं तिनीहरूलाई चपाउनु. तिनीहरूलाई सारा दु: ख, तिनीहरूलाई कटौती छैन!
दाँत लिंदा आफैलाई एक स्ट्रबेरी पेस्ट बनाउन. स्ट्रबेरी लामो आफ्नो दाँत सेतो गर्न प्रतिष्ठित गरिएको छ. आफैलाई लागि केही पेस्ट अप मिश्रण गर्न, तिमीलाई खाचो पर्नेछ 1/4 कप पानी, बेकिंग सोडा (1/2 कप) मसले गरिएका र तीन स्ट्रबेरी.
सिगार वा चुरोट धूम्रपान छैन. यी दुवै आफ्नो दाँत discolor गर्न discolored गर्न सिद्ध गरिएको छ. पहेंलो खोल्दै आफ्नो दाँत राख्न धूम्रपान छोड्ने प्रयास. तपाईं धूम्रपान छोड्ने लागि संघर्ष गर्दै छन् भने, प्रक्रिया मा तपाईंलाई सहयोग गर्न सुझाव वा दबाइहरु लागि आफ्नो चिकित्सक संग परामर्श. तपाईं सकारात्मक समर्थन र ठोस सल्लाह धेरै आवश्यक.
आजकल, तपाईं साँच्चै एक पहेंलो मुस्कान सहेर लागि कुनै बहाना छ. तपाईं घर प्रयोगको लागि डिजाइन धेरै दांत दाँत उत्पादनहरु को एक प्रयोग गरेर एक brighter मुस्कान प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईंले घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ whitening, किरा दाँत प्रक्रियाहरु को दांत भन्दा धेरै कम खर्चिलो छन्, र मूलतः तिनीहरूले तपाईं एक नै परिणाम दिन.
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: फल, स्ट्रबेरी, दाँत whitening,, whitening, उत्पादनहरु, whitening, दाँत
तपाईंको मुस्कान यी टिप्स मद्यपानोत्सव बनाउन